ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: တော်ဝင်သစ်စက်ရုံက အလုပ်သမားတွေ တရားခွင် မျှတစေဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အကူအညီတောင်း (ရုပ်သံ)
တော်ဝင်သစ်စက်ရုံက အလုပ်သမားတွေ တရားခွင် မျှတစေဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အကူအညီတောင်း (ရုပ်သံ)
let we see,how? good luck for all.
ခိုး၊ ဆိုး၊ လုယက်နေကြသူတွေ မဟုတ်ဘူး။
သူတို့ဘ၀တွေ တရားမျှတမှု မရှိလွန်းလို့ ဆန္ဒဖေါ်ထုတ်ကြရင်း ညစ်ပတ်တဲ့ သူဌေးရဲ့ ထောင်ချောက်ထဲကို ၀င်သွားကြရတယ်။
အလုပ်သမားတွေရဲ့ ပဋိပက္ခကို အစိုးရအနေနဲ့ရော ဥပဒေအနေနဲ့ပါ ထိရောက်တဲ့ အကာအကွယ်မပေးတဲ့အပြင် အခုလိုတွေ ဖြစ်ပျက်နေတာတွေဟာ အတော်ကို စိတ်ထိခိုက်စရာ ဖြစ်ရတယ်။
လောကကြီးမှာ တရားမျှတမှုဆိုတာ မရှိတော့ဘူးလား။
ဆင်းရဲတွင်းနက်တဲ့ ပြည်သူတွေ နူရာဝဲစွဲတဲ့ အဖြစ်မျိုးတွေ ကြုံတွေ့နေရတယ်။
တရားသူကြီးတွေဟာ ငွေကြေးချမ်းသာသူတွေရဲ့ ခပိုက်ဆောင်တွေ၊ လက်ကိုင်ဒုတ်တွေ ဖြစ်နေကြတယ်။
ဒီအလုပ်သမားတွေကို အာမခံတောင် မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင် ဒီဥပဒေဟာ တရားမျှတတဲ့ ဥပဒေ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ဘူး။
ဘာမှ ကျောထောက်နောက်ခံ မရှိရှာတဲ့ အလုပ်သမား တွေကိုဗျာ..